XEERKA DOORASHOOYINKA MADAXTOOYADA IYO G/DEGAANADA
XEERKA DOORASHOOYINKA MADAXTOOYADA IYO G/DEGAANADA (Xeer Lr. 20/2001)
Markuu tixgeliyey: Baahida loo qabo ka digo-rogashada hab-beeleedka iyo xaqiijinta himilada ummaddu ka dhursugaysay mudada dheer ee u tartanka xorta ah ee xilalka Qaranka.
Komishanka: waxaa loola jeedaa Guddiga sare ee loo xilsaaray maamulidda iyo ka garsooridda
Goob-codbixin: waxa loola jeedaa goobaha tirooyin dadweynaha ka mid ah oo isku degaan dhaw ka dhiibanayaan codkooda.
Wakiil: waxa loola jeedaa xubinta urur/xisbi u soo wakiishay la socodka hawlaha doorashada ee
goob-cod-bixineed ama xafiisyada doorashada.
Murashax: waxa loola jeedaa xubinta uu ururkiisu/xisbigiisu u soo magacaabay inuu u tartamo
xil lagu heli karo doorasho.
Liis/Liisaska: waxa loola magacyada murashaxiinta uu soo gudbiyey xisbi/urur loona kala hormariyey siday u kala helayaan doorashada.
a) Madaxweynaha & Ku xigeenkiisa 5 sano
b) Golayaasha Degaanada 5 sano
2. Waa in aan da'diisu ka yaraan 16 sano, sanadka
doorashada la qabanayo.
1. Wuxuu codkiisa ka dhiiban karaa degmada uu ku sugan yahay ee doorashadu ka socoto.
1. Shaqaalaha Dawladda, kuwa Hay'adaha madaxa banaan ee Dawladda iyo ciidamada Qaranka darajo kasta ha lahaadeene looma ogola inay isu sharaxaan doorashooyinka Degaanada iyo Madaxwaynaha ama Ku-xigeenka Madaxweynaha, haddii aanay shaqo-ka-tegis soo qoran 180 cisho ka hor taariikhda qabashada doorashada. Xilligani doorasho ee hadda (doorashadan
hore) mudada shaqo ka tegistu waxay ahaanaysaa 40 cisho ka hor taariikhda qabashada doorashada.
2. Shaqo-ka-tegidda waxa shardi u ah inay sidaa qoraal ku soo caddeyso xafiiska ama Hay'adda awooda u leh caddayntaas.
Komishanka ayaa cayimaya taariikhaha la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan Dastuurka, waxanay ku soo bixi doontaa Degreeto Madaxweyne.
1. Marka la qabanayo doorashada Madaxweynaha & ku xigeenka waxa dalka loo qaybinayaa gobolo-doorasho (electoral regions) oo loo sii qaybinayo goobo-codbixin (polling stations) iyadoo la waafajinayo soohdimaha Gobolada dalka JSL.
a) Xafiiska goobta cod-bixinta doorashada
b) Xafiiska Degmada ee doorashada
c) Xafiiska Gobolka ee doorashada
d) Xafiiska dhexe ee doorashooyinka
a) Gudoomiye iyo 6 xubnood
b) Gudoomiyaha & Gudoomiye-xigeenka Komishanka ayaa iska dhexdooranaya.
c) Mudada xilka ee Komishanku waa 5 sano, oo ka bilaabmaysa marka Golaha Wakiiladu ansixiyo, waana loo cusboonaysiin karaa xilka.
d) Shaqaale dawladeed, xubin Barlaman, Xubnaha Golaha Wasiirada, ciidan Qaran iyo xubin xil u haysa urur/xisbi kama mid noqon karo Komishanka.
b) 2 xubnood oo ay soo xulayaan ururada/xisbiyada mucaaridka ah ee diiwaan-gashan.
2. Waa inaan da'diisu ka yarayn 40 jir kana waynayn 60 jir.
b) Marka uu xilka gudan kari waayo karti darro ama caafimaad darro awgeed
c) Marka uu ku kaco anshax-xumo, xatooyo, musuq-maasuq iwm
1. Komishanku wuxuu yeelanayaa Miisaaniyad gaar ah, oo ay soo qorshaysteen, una gudbinayaan Madaxweynaha, taas oo marka laysla ogolaado loo gudbinayo Golaha
Wakiilada oo ansixinaya.
1. Xarunta degmo kasta waxa jiraya xafiis doorasho degmo. Waxaanu ka koobmayaa gudoomiye, laba hubiye, hubiyaha ugu da'da weyn ayaana noqonaya ku xigeen.
3. Gudoomiyaha, hubiyayaasha, xoghaynta iyo tiriyayaasha waxa magacaabaya Komishanka, isagoo awood u leh kala bedelidooda.
1. Xubnaha Komishanku u magacaabo xafiisyada doorashada waa in loo sheego in xilka loo magacaabay ugu yaraan 15 cisho ka hor taariikhda la qabanayo cod-bixinta.
2. Gunnada kala-badh ayaa la siinayaa haddii hawlwadeenku yahay shaqaale dawladeed ama Hay'ad dawladeed (public bodies).
3. Hawlwadeenka loo diro hawl meel ka baxsan halka uu ku noolaa wuxuu yeelanayaa gunno-saad (subsistence allowance) mudada uu maqan yahay, waxana qorshaynaya Komishanka.
1. Habka doorashooyinka degaanada wuxuu noqonayaa Habka isu qiyaasidda saamiyada kuraasta iyo tirada codadka uu xisbi/urur ka helo gobol ama degmo (proportional representative system). Hasa yeeshee doorashada Madaxweynaha iyo Ku xigeenka Madaxweynaha waxay noqonaysaa habka aqlabiyadda hal-dheeriga ah (majority system), sida dastuurku tilmaamay.
2. Doorashada Golayaasha degaanada xisbi/urur kastaaba wuxuu soo bandhigayaa liiska dadka uu u doonayo in degmada looga doorto. Tirada dadka liiska lagu qorayaa waa in aanay ka yaraan laban-laab xubnaha laga doonayo in degmo kasta laga soo doorto.
3. Tirada kuraasida uu helayo liis kasta oo ah dadka loo soo bandhigay inay ka qaybgalaan doorashada Golayaasha degaanka waxa loo xisaabayaa qaabka qiyaasta saamiga kuraasta iyo codadka (proportional representative list system).
4. Degaamada aanu tartan ka jirin ee la soo bandhigo liis keliya, cod-bixin laga samayn mayo, waxana la qaadanayaa dadka loo soo magacaabay Degaanadaas, iyadoo ku jaan go'an tiradii degmada laga doonayay, waxana loo raacayaa sida loo soo kala horaysiiyey.
1. Liiska murashaxiinta golaha degaanka waxaa soo bandhigaya Guddiga degmada ee Ururka/xisbiga, waana in si cad loo soo muujiyaa magaca murashaxa oo saddexan,
meesha uu ku dhashay iyo sanadkii uu dhashay; haddii ay jiraan dad isku magacyo ah waa in la sheego naanysta (haddii ay jitro) iyo magaca oo afaran, waxa kale oo la soo muujinayaa degmada laga sharaxay.
a) Caddeynta shaqo ka tegidda ee ku xusan qodobka 7aad ee xeerkan
b) 4 koobi oo ay si wanaagsan uga muuqato astaantii ururku/xisbigu.
c) Caddeyn uu bixiyey murashax kastaa oo uu ku muujiyey inuu ogol yahay murashaxnimada iyo inuu buuxiyey shuruudaha ku xidhan
d) Rasiidhada bixinta deebaajiga murashaxnimo ee Wasaaradda Maaliyadda eeku xusan qodobka 25aad ee xeerkan.
3. Sida ay murashaxiintu liiska ugu kala horeeyaan ee la isugu xigsiiyey ayaa loo aqoonsanayaa in loo soo kala doortey ururka/xisbiga gudihiisa.
1. Astaamaha liisaska murashaxiinta ee ururada/xisbiyada ka muuqdaa waa inay kala duwanaadaan marka la soo bandhigayo.
2. Xisbi/ururna waa in aanu isticmaalin astaan uu xisbi/urur kale hore ugu isticmaalay doorasho hore.
3. Astaantu waa in ay ahaato mid gaar ah oo muujinaysa sumadda aqoonsiga, hase yeeshee waa in aanay ka muuqan calaamado dawladeed, qabyaaladeed ama dariiqo.
4. Xisbi/urur wuxuu isticmaalayaa astaan keliya markuu soo bandhigayo murashaxiintiisa heerka degaanka ama Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
a) Sl.Sh. 1,000,000 Murashaxiinta Madaxtooyada midkiiba
b) Sl.Sh 50,000 Murashaxiinta Golayaasha Deegaanka
1. Liistooyinka murashaxiinta Madaxweynaha & ku xigeenkiisa waa in la geeyo xafiiska Komishanka, kuwa murashaxiinta degaanadana la geeyo xafiisyada doorashada ee degmooyinka ka hor 6da galabnimo maalinta 45aad intaanay cod-bixintu dhicin, iyadoo ay dhan yihiin lifaaqyadiisa ku tilmaaman xeerka.
3. Komishanka iyo xafiisyadiisu waa inay 30 maalmood ka hor taariikhda cod-bixinta ku dhajiyaan liisaska murashaxiinta degmada goobaha fagaarayaasha, boodhadhka ogeysiiska, xafiisyada Dawladaha Hoose iwm, sidoo kale waa in suuqa lala maro oo cod baahiye lagu
sheego, haddii ay suuragal tahayna idaacadda laga sheego ama wargeysyada lagu baahiyo.
Ololaha doorashooyinku wuxuu bilaabmayaa marka la soo dhejiyo ogeysiiska ku xusan qodobka 27aaad ee xeerkan, waxaanu dhamaanayaa 48 saac ka hor taariikhda la qabanayo cod-bixinta.
1. Dadka qabanqabinaya shirarka iyo banana-baxyada la xidhiidha ololaha doorashada waa inay qoraal ku ogeysiiyaan Gudoomiyaha Degmada iyo Saldhigga booliska ay khusayso 48 saacadood ka hor wakhtiga la samaynayo. Gudoomiyaha degmadu wuu diidi karaa in la
sameeyo shirarkaas ama banaan-baxaas, haddii uu ku qanco in waxyeelo loo gaysanayo caafimaadka, anshaxa, ama nabadgelyada guud iwm, waxaana ku waajib ah inuu amro in shirarkaas ama banana-baxaas lagu qaban karo meel uu tilmaamay ama wakhti uu cayimay.
2. Magaalo ama tuulo laguma wada qaban karo maalin qudha wax ka badan laba shir iyo banaan-bax.
1. Muuqaalka boodhadhka iyo waraaqaha dacaayadaha ololaha doorashada waa in la geeyo xafiiska Gudoomiyaha degmada 48 saac ka hor intaan shaaca laga qaadin. Mana jirto wax cashuur ah oo laga bixinayo arrintaas.
Shirarka iyo banaan-baxyada ololaha doorashooyinka waxa ka reebban in loo qaato HUB iyo lebbis ciidan ama wax u eeg.
3. Magacyada wakiilada ururada/xisbiyada waa in loo geeyo Komishanka ama xafiisyadiisa 10 maalmood ka hor taariikhda cod-bixinta. Komishanka ama xafiisyadiisu wuxuu siinayaa wakiil kasta qoraal ogolaansho ah oo u fasaxaya inuu geli karo kana hawl geli karo goobta cod-bixinta ee loo soo diray.
2. Waa inuu si rasmi ah u degan yahay degmada uu iska sharaxayo.
4. Waa inaan da'diisu ka yareyn 35 sano sanadka doorashada la qabanayo
2. Qalabka ku xusan c, d, e, f, g , ee ku tilmaaman faqradd xubinta hore waa inay ahaadaan laba laba oo si fiican loo kala calaamadiyaa haddii wadajir loo qabanayo doorashooyinka Degaanka.
e. Qalabka wax lagu qoro oo kala duwan (stationary)
4. Qalabka xafiis kasta oo doorasho waa in lagu rido saxarad gaar ah. Saraxadda waa in la xidho oo la lingaxo. Komishanku waa inay qalabkaas dirto wakhti ku haboon iyadoo la socdaan sanaadiiqdii codka lagu ridayey, waxaana loo dirayaa xafiisyada doorashada degmada/gobolka oo u sii gudbinaya goobaha cod-bixinta.
5. Komishanku waa inay xafiisyadooda degmo/gobol u diyaariso waraaqo cod-bixineed oo dheeraad ah oo ku lingaxan kiishash si loo siiyo xafiiska doorasho ee soo codsada, iyadoo ay waajib tahay in ay soo sababeyaan , waxana la gudoonsiinayaa gudoomiyaha goobta cod-bixinta.
6. Meelaha is gaadhsiintu adag tahay Komishanku wuxuu u dhiibi karaa waraaqaha cod-bixinta oo lingaxan oo dheeraad ah kormeerka doorashada ka hawlgalaya si uu u hayo xafiiska doorashada ee degmada/gobolka.
Waraaqaha cod-bixinta waa ianay ku daabacan yihiin astaamaha ururada/xisbiyada oo kor u taagan si afar gees ah. Astaan kastaa waa inay leedahay meel banaan oo loogu talagalay inuu cod-bixiyuhu ku muujiyo codkiisa. Waraaq kastaana waa ianay leedahay cidhif yar oo xabagaysan oo lagu rogo warqadda cod-bixinta oo lagu lingaxo.
1. Goob kasta oo codbixinta laga dhiibanayaa waa inay lahaato laba qol oo yar yar oo loogu talagalay in lala galo calaamadaynta waraaqaha cod-bixinta loona habeeyo in qarsoodi codka lagu hubiyo.
2. Sanaadiiqda cod-bixinta lagu ridayaa waa inay yaaliin meel muuqata ama hareeraha ka xigaan miisaska Gudoomiyaha goobta cod-bixinta.
1. Halka nuqul ee ku xusan qodobka 27aad ee xeerkan waa in lagu dhejiyo meel la wada arki karo oo ka mid ah xafiiska doorashada ama goobta cod-bixinta gudaheeda iyo dibeddeedaba.
a. Nuqul muujinaya magacyada hawlwadeenada goobta
b. Nuqul muujinaya wakiilada ururada/axsaabta ee goob-jooga ahaanaya.
1. Gudoomiyaha goobta cod-bixinta waxa waajib ku ah inuu ilaaliyo nidaamka inta doorashadu socoto. Booliska ayuu ku amri karaa inuu qof goobtaa dibedda uga saaro ama in la qabto qof gef ku sameeyay hawsha doorashada ama qof waali ka muuqato.
2. Booliska looma ogola inuu galo gudaha goobta cod-bixinta haddii aanu Gudoomiyuhu amrin.
1. Xaffiiska goobta cod-bixinta waxa geli kara dadka maamulaya xafiiska iyo kuwa ka wakiilka ah axsaabta/ururada iyo kuwa codka bixinaya.
1. Cod-bixiye kasta wuxuu codkiisa dhiiban karaa markuu:-
a. Bixiyo tilmaamihiisa ku saabsan magaciisa, aqoonsigiisa iyo da'diisa.
b. La hubsado inuu xaq u leeyahay cod-bixinta oo buuxinayo shuruudaha cod-bixinta, iyadoo si guud mar ah looga eegayo aqoonsigiisa, waraaqaha uu sito, marag-muujin kale ama sidii kale ee kolba loo caddayn karo.
2. Calaamad khad aan tirtirmi Karin laga mariyo cidida far-yarada gacanta bidix, haddii gacanta bidix maqan tahayna waa in cidida far-yarada gacanta midig laga mariyo, haddii ay labada gacmood maqan yihiin waa in laga mariyo meel kale oo jidhka cod-bixiyaha oo la arki karo.
1. Markuu dhamaado hawlgalka ku xusan qodobka kore, Gudoomiyaha goobta cod-bixinta wuxuu cod-bixiyaha siinayaa warqaddii cod-bixinta oo lagu dhuftay shaambaddii goobta oo laga reebay dabadii hadhaaga ahayd ee laga gooyey.
2. Markaa cod-bixiyuhu wuxuu gelaya qolka yar ee uu warqadda ku soo calaamadinayo, kuna soo xidhanayo.
3. Cod-bixiyuhu wuxuu calaamad soo saarayaa warqaddii cod-bixinta oo ka soo saarayaaa dhinaca midig ee astaanta uu codka siinayo, asagoo isticmaalaya qalin-Biro ah oo uu siinayo xoghayaha goobtu. Ka dib warqaddii wuu soo laabayaa.isagoo ku xidhaya dacalkii yaraa ee xabagta lahaa waxanu ku ridayaa sanduuqii loogu talagalay cod-bixinta.
4. Markuu cod-bixiyuhu warqaddiisa ku rido meesha daloosha sanduuqa, waa inuu goobta ka baxo, waxase ka horaysa inuu Gudoomiyaha goobtu hubiyo in cod-bixiyaha ay si fiican uga muuqato calaamaddii aan tirtirmayn, markaas haddii aanay calaamaddu si fiican u muuqan waa
in lagu celiyo mar kale, si loo cadeeyo inuu codkiisii dhiibtey.
5. Haddii cod-bixiyuhu arko in warqadda la siiyey aanay dhamayn ama dhaawac qabto, waa inuu soo celiyo oo Gudoomiyaha goobta weydiisto mid fayow, arrintaas waa in qoraal ahaan loo diiwaan-geliyo.
6. Gudoomiyaha goobtu wuxuu xaq u leeyahay inuu goobta ka saaro cod-bixiye kasta oo cudur-daar la'aan goobta ku daaha oo laga qaado warqadda cod-bixinta, waxana mar kale loo ogolaan karaa inuu codkiisa dhiibto markay dadkii kale ee goobta ku sugnaa ee codkooda dhiibanayey ay dhamaadaan.
7. Haddii cod-bixiye lagu helo inuu sito waraaqo cod-bixineed oo dheeraad ah ama kuwo ka duwan kuwa codka lagu bixinayo ama hore codkiisa u soo dhiibtey, Gudoomiyaha goobtu waa inuu si de deg ah u amro in la qabto oo booliska u dhiibo si maxkamad loo horgeeyo, Arintaas waa in qoraal ahaan loo diiwaan-geliyo.
1. Hawlgalka cod-bixintu waa in la dhamaystiro hal maalin gudaheed oo ka bilaabmaysa 7:00 saac ee subaxnimo kuna dhamaanaysa 6:00 fiidnimo.
Xafiiska goobta cod-bixintu waa inuu si ku meel gaadh ah go'aan uga gaadho cabashooyinka (haddii ay jiraan) oo ay ka mid yihiin kuwa af ahaan loo soo jeediyey iyo wixii muran ah ee ku hawlgalka goobta cod-bixinta. Cabashooyinka iyo muranadaas waa in qoraal ahaan loo
a. Hubinayaa tirada cod-bixiyayaasha isagoo ka eegaya tirada waraaqaha cod-bixinta.
b. Ururinayaa oo tirinayaa waraaqaha cod-bixinta ee aan la isticmaalin waxaanu ku ridayaa baqshadda 1aad.
c. Xaqiijinayaa oo saxeexiisa ku muujinayaa waraaqaha doorashada ee xumaaday ama aan hagaagsanayn ee ay soo celiyeen cod-bixyayaashu, ama la arkay inay xun yihiin, waxaanu ku ridayaa baqshada 2aad.
1. Marka Gudoomiyaha goobtu dhameeyo hawsha ku xusan qodobka la soo dhaafay wuxuu bilaabayaa tirinta waraaqaha cod-bixinta ee sanduuqa ku jira. Si taa loo fuliyo Hubiyuhu wuxuu markiiba sanduuqa ka soo saarayaa laba warqad cod-bixineed, wuxuuna u dhiibayaa
Gudoomiyaha, Gudoomiyuhuna wuxuu furayaa warqaddii codbixinta oo cod sare ku dhawaaqayaa ururka/xisbiga codka lagu siiyey; warqadaas waxa hubiyuhu u sii gudbinayaa Hubiyaha kale oo isna tusi doona wakiilada Xisbiyada/Ururada, markaas xoghayaha ayaa gelinaya foomka khaanadaysan ee loogu talagalay ururka/xisbiga codkaas helay waxaanu warqadaas ku ridayaa sanduuqa loo sameeyay..
3. Gudoomiyaha goobtu markuu dhameeyo tirinta, wuxuu hubinayaa tirada waraaqaha cod-bixinta, iyo inay is keenayaan tirada codadka ururada/axsaabtu guud ahaan heleen, wuxuu intaas raacinayaa tirada codadka lagu muransan yahay ama aan hagaagsanayn ama aanay waxba ka
jirin ee ku xusan qodobka 57aad ee xeerkan.
4. Gudoomiyaha goobtu markuu caddeeyo ee sidaas saxeexiisa ku muujiyo wuxuu waraqadaha aan saxda ahayn ama waxba kama jiraanka laga soo qaadey ama muranku ka taagan yahay iyo waraaqaha cabashada iyo dacwooyinka ku ridayaa baqshadda 3aad.
5. Gudoomiyaha goobtu wuxuu ugu dambeyntii waraaqihii cod-bixinta ee la tiriyey ku ururinayaa baqshadda 4aad.
1. Markuu Gudoomiyaha goobtu dhameeyo hawsha tirinta ee ku xusan qodobada kore wuxuu iyadoo fagaare ah ku dhawaaqayaa wadarta tirada cod-bixiyayaasha, codadka saxda noqday iyo tirada codadka uu helay liis kasta oo xisbi/urur.
2. Intaa dabadeed, Baqshadaha waa la lingaxayaa, korkana waxa lagaga dhufanayaa shaambaddii goobta, waxaana korka wadajir uga saxeexaya Gudoomiyaha goobta, ugu yaraan hal hubiye iyo wakiilada xisbi/urur kasta oo murashaxiin ku leh goobta-codbixinta.
3. Baqshadaha korkooda waxa lagu qorayaa faahfaahinta waxa baqshadda gudaheeda ku jira.
4. Hawsha tirinta waa in loo dhamaystiro si isdaba jooga ah ee la soo tilmaamay oo hakad lahayn oo wax kale aan la dhex galin.
1. Waraaqaha cod-bixinta marka la tirinayo waxay
noqonayaan waxba kama jiraan:
a) Haddii warqadda cod-bixinta ay ka muuqdaan qoraal ama calaamado ama raad si xirfadl leh loo soo agaasimay oo aan loogu talagelin in lagu qoro.
1. Qoraalka raadraaca ee goobta cod-bixinta waxa lagu qorayaa foom loogu talagalay oo saddex nuqul ah, kaas oo Komishanku u soo diyaariyey.
2. Laba nuqul oo qoraalka raadraaca ka mid ah waa in lagu rido saxaradda oo la raaciyo baqshadaha lingaxan ee ku xusan qodobka 55aad oo loo gudbiyo xafiiska doorashada degmada, nuqulka saddexaad waa in loo gudbiyo Gudoomiyaha xafiiska doorashada ee gobolka, iyadoo la raacinayo wixii ka hadhay agabkii doorashada ee kala duwan.
3. Gudoomiyaha doorashada ee degmaddu wuxuu u gudbinayaa baqshadaha natiijadda cod-bixinta doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo lingaxan iyo nuqulka saddexaad ee qoraalka raadraca Gudoomiyaha xafiiska doorashada gobolka
2. Xafiiska doorashada ee degmadu waa inuu markaas hubiyo in qoraalada iyo baqshadaha ku xusan qodobada 50,51,54aad ee xeerkan ay dhan yihiin.
3. Xafiiska doorashada degmadu markuu hubiyo natiijada doorashada Madaxweynaha & ku xigeenkiisa wuxuu u gudbinayaa xafiiska doorashooyinka ee gobolka oo markuu hubiyo u sii gudbinaya xafiiska dhexe.
Tirinta cod-bixinta Doorashada Madaxtooyada.
Gudoomiyaha doorashada ee degmadu markuu qabanayo hawsha doorashada Madaxtooyada waa inuu:
a. Waa inuu tiriyo oo isu geeyo dhamaan cod-bixinta ka soo hoyatay goobaha cod-bixinta.
b. Waa inuu hubiyo codadka waxba kama jiraanka noqday ee ka soo hoyday goobaha cod-bixinta.
c. Waa inuu go'aan ka gaadho codadka muranku ka taagan yahay, sida uu tilmaamay qodobka 53aad ee xeerkan.
d. Waa inuu isu geeyo codadka xisbi kasta oo murashaxiin ku leh degmada ka helay goobaha
e. Waa inuu natiijada codadka ee soo baxay iyo cabashooyinka (haddii ay jiraan) u gudbiyo Xafiiska doorashada gobolka.
1. Xafiiska doorashada ee gobolku markuu helo nuqulka 3aad ee qoraalada raadraaca goobaha cod-bixinta iyo natiijada guud ee codadka ka soo baxay degmooyinka gobolka iyo inta xisbi kasta ka helay ee uu u soo gudbiyey xafiisyada doorashada ee degmooyinka gobolku wuxuu hubinayaa xisaab ahaan natiijada codadka.
2. Gudoomiyaha xafiiska doorashooyinka ee gobolku wuxuu hawlgalka ka samaynayaa raad raac lagu qorayo foomka loogu talgalay oo saddex nuqul ka kooban, wuxuuna laba nuqul oo ka mid ah u gudbinayaa xafiiska dhexe ee doorashooyinka (Komishanka) kan asliga ahna (original) Maxkamadda sare ee dalka.
3. Xafiiska doorashda ee gobolku markuu helo natiijada cod-bixinta doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, Wuxuu natiijada u gudbinayaa Komishanka si uu u hubiyo uguna dhawaaqo natiijada si ku meel gaadh ah.
Gudoomiyaha xafiiska doorashada ee degmadu markuu helo agabka ku xusan qodobka 55aad ee doorashada degaanka, markaas waa inuu :-
1. Waa inuu tiriyo oo isu geeyo dhamaan cod-bixinta ka soo baxday goobaha cod-bixinta degmada.
2. Hubiyo codadka waxba kama jiraanka ah ee ka soo xerooday goobaha cod-bixinta degmada.
2. Nuqulada raadraacyada (records) waxaa loo qaybinayaa sida uu tilmaamayo qodobada 55,58aad ee xeerkan.
1. Gudoomiyaha Maxkamadda gobolku waa inuu hubaal-celiyo oo ansixiyo go'aanka doorashada
Golayaasha degaanada. Waa inuu go'aan ka gaadho wixii muran ama cabasho ah ee guud ahaan uu u soo gudbiyey xafiiska doorashada ee degmadu ee soo baxay intii hawshu socotey.
2. Wixii tabasho ama dacwad ah ee aan loo keenin xafiisyada doorashada waxaa loo gudbin karaa maxkamadda gobolka toban cisho gudahood oo ka bilaabanta maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada.
b. U yeedho Wakiilada ururada/axsaabta si ay goob-joog u ahaadaan marka hawshu socoto.
c. Inay wadajir u hubiyaan in baqshaduhu lingaxan yihiin oo aan la furin, markaa waa inuu furaa oo ka soo saaraa agabka ku jira.
d. Inay wadajir u hubiyaan in baqshadahu lingaxan yihiin oo aan la furin, markaa waa inuu furo baqshadda ay ku jirto shaambadda xafiiska doorashadu, waana in qoraalka raadraaca lagu muujiyo lambarka shaambada.
e. Waa inuu qalabka hadhay u gudbiyo xoghayaha.
1 Dacwadaha ku saabsan doorashooyinka Madaxweynaha iyo ku xigeenka Madaxweynaha waxa awood u leh maxkamadda sare, waana in dacwadaasi soo gaadho kaalinta maxkamadda 20 maalmood gudahood oo ka bilaabmaya marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada. Haddii ay
wakhtigaa dhaafto dacwadaasi wax tixgelin ah ma yeelanayso.
2 Maxakamadda Sare markay hesho qoraaladda raadraaca ee xafiisyada gobolada ee doorashada iyo kuwa xafiiska dhexe ee Komishanka isla markaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada waxay ku dhawaaqaysaa natiijada doorashada Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Xeerkani wuxuu dhaqangelayaa marka uu Madaxweynuhu saxeexo, laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Dawladda.
C/Qaadir X. Ismaaciil Jirdeh